Booliska NewZealand oo toogtay nin weerar geystay oo ay ku sheegeen inuu ahaa argagixiso | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Booliska NewZealand oo toogtay nin weerar geystay oo ay ku sheegeen inuu...
Booliska NewZealand oo toogtay nin weerar geystay oo ay ku sheegeen inuu ahaa argagixiso
Ra’isul Wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa xaqiijisay in boolisku ay dileen nin ay ku sheegtay inuu ahaa argagixiso ka tirsan ururka Daacish, kaas oo toorey ku weeraray dad ka adeeganaya dukaan ku yaalla magaalada Auckland, kaas oo dhaawac u geystay lix qof.
Seddax ka mid ah lixdaas qof dhaawacooda waxaa la sheegay inuu yahay mid halis ah.
Ra’isul Wasaare Ardern ayaa sheegtay in falkaas uu ahaa weerar argagixiso, iyadoo sheegtay in ninkani uu ahaa muwaadin u dhashay SriLanka, isla markaana ay weerarkaan ku dhiirigalisay Argagixisada Daacish.
Sidoo kale R/Wasaare Ardern, waxay sheegtay in ninkaas ay horay xogtiisa u hayeen laamaha ammaanka oo shaqsiyan ay mar hore soo gaartay warbixintiisa, laakiin aysan jirin sifo sharci ah oo lagu xiro.
“Haddii uu samayn lahaa wax noo oggolaan lahaa inaan xabsiga ku tuurno, wuxuu ahaan lahaa maxbuus xilligan,” ayuu yiri Ra’iisul wasaare Ardern.
Taliyaha booliska magaalada weerarku ka dhacay Andrew Coster oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri, “Kooxda dabagalka booliska iyo kooxda sida gaarka ah u tababaran ayaa ninka ka soo raacay gurigiisa ilaa dukaanka, iyagoo markii hore u maleynayay inuu dukaanka ka soo adeeganayo. Balse Dukaanka ayuu soo galay sidii caadiga aheyd ee uu hore u sameyn jiray, laakiin wuxuu midi ka soo qaatay isla dukaanka dhexdiisa.”
Previous articleWasiirka A/Dibadda Soomaaliya oo qadka Taleefonka kula hadlay dhigiisa Cumaan
Next articleTurkiga iyo Qadar oo Taalibaan ka caawinaya dib u furista garoonka diyaaradaha ee Kabul
Mareykanka oo qirtay in duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday Kabul ay carruur ku laayeen
Gabar Soomaali ah oo ka mid noqotay baarlamaanka dalka Norway
Hoggaamiyaha kooxdii qarxisay masaajidka Daarul-Faaruuq oo xukun adag lagu riday